I-FAQs eNtsha yokuKhetha ii-FAQ-i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kweNdawo yokuTyhilwa kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / Blog / Khetha / I-New Jersey Selectate FAQs
Disemba 4, 2019 KhethaUshiye uluvoLazaro Cardenas
Leliphi ixesha elifanelekileyo lokucwangciswa kwezindlu eNew Jersey?
Wonke umntu uyafa. Nangona kunjalo ayinguye wonke umntu olungele ukufa. Kwaye nokuba umntu ukulungele ngokwasemphefumlweni ukusweleka, oko akuthethi ukuba iimpahla zakhe zikwimeko entle ukubonelela izibonelelo okanye ukukhusela iiasethi zentengiso. Ubomi bufikelela kuye wonke umntu, kwaye ukulungiselela isiphelo kufumaneka kuye wonke umntu e-NJ nkqu nezo zifuna ukuphepha abameli. Sicebisa ukuba uqeshe umntu onobuchule ukuze ancede Yila umyolelo.
Nawuphi na umntu ongummeli ongummeli omdala uyakukuxelela ukuba ukucwangciswa kwepropathi kungaphezulu kokulungiselela umyolelo. Kodwa ngaphambi kokuba sikubethe phantsi ngazo zonke izinto ezigutyungelwe ucwangciso lifa, masigxininise kumanqanaba abantwana kwaye sigubungele ukuba kutheni na ukuthanda ukwenza kufanelekile kwaye iyindawo elungileyo ukuqala.
Oku kuhla kucingela ukuba abantu banokufumana ubunzima xa bejamelene nentembeko yokufa kwekamva labo. Abantu kuzo zonke iindidi zobomi bathanda ukucinga ukuba xa bengacwangcisi ukufa, banokuphila ngonaphakade. Phantse i-60% yabantu abadala baseMelika abanayo intando, ukungathenjwa, kwaye akukho sicwangciso sendawo, ngokutsho kophando lwamva nje Caring.com. Kulapho ungathabatha khona inyathelo lakho lokuqala ukuba ngcono kune-60% yaseMelika ukuze ukwazi ukubonelela usapho lwakho ngesicwangciso esicacileyo malunga nokuba zeziphi izinto zakho, zeziphi iinjongo zakho zokugqibela, nokuba unayo imigaqo-nkqubo ye-inshurensi, iitrasti, kunye ukuba ngokubanzi ubucinga usapho lwakho kwimeko yokufa kwakho kuba ubufuna ukuba kube lula njengoko kunokwenzeka kubathandekayo bakho.
Ukuba usweleka kwi-NJ kwaye awunayo intando, ilizwe laseNew Jersey linesicwangciso sakho, iimpahla zakho kunye nokuba ngubani na ozifumanayo. Ibizwa ngokuba kukufa "kumathumbu." Ngokubelekisa, iimpahla zakho ziye kwimo ye-New Jersey zimiselwe kwangaphambili. Aba bantu ngokuqinisekileyo banokuba zizalamane zakho ezihlala kufutshane. Aba bantu banokuba okanye abanakuba ngabantu obathandayo nabathandayo. Ukuba ukhe wanomntu okuncedayo kule minyaka ingama-30 njengomgcini wendlu, kwaye uphile umntu wokuxhasa. Banelungelo lokufumana nantoni na ukuba usweleka ngaphandle komyolelo. Umzalwana oswelekileyo kudala angabonisa ukuba akukho ndawo anokuthi anelungelo kuyo yonke into onayo.
Ngoku khawube nomfanekiso-ngqondweni wakho wawukhe watshata ngaphambili, unabantwana abavela komntu owahlukileyo kunawe, ngoku unabo abantwana ukusuka kumtshato wangaphambili, kwaye unezipho ongathanda ukuzinikela xa udlula. Oku kunokuvakala kunzima. Nangona kunjalo ngeGqwetha leNgcaciso le-NJ ecaleni kwakho, kuya kuba lula njengoko sizokukhokela ngenyathelo ngenyathelo kwinkqubo. Xoxa ngazo zonke izinto onokukhetha kuzo, kwaye uqonde iimfuno zakho kunye nento ozama ukuyenza xa uswelekile.
Ndingakwazi ukwenza umyolelo ngokwam eNew York?
Impendulo emfutshane yeyakho unako, kodwa ukuba yenziwe ngokungachanekanga inokubiza iindleko zakho kwixa elizayo.
Umzekelo, kutshanje besinomthengi osweleke umama wakhe phambi kwakhe. Kwaye, emva koko ugogo wakhe usweleke. Ngethamsanqa, umakhulu wayenomnqweno. Ngelishwa, umyolelo awuzange ulungiswe liGwetha likaRhulumente.
Uza kuyalela ukuba uMalume kumxumi wethu afumane idola ye-1 yedola. Kwaye ukuba umama wakhe ufumane yonke enye into kwaye enze njenge umgwebi welifa. Ukushiya idola komnye umntu kuvakala ngathi kuyindlela elungileyo yokunamathela komnye umntu kumyolelo, nangona kunjalo, kungcono ukutsho loo mntu kwaye lonke uludwe lwabo kufuneka luphathwe njengokuba babechonga umntu oza kwenza intando.
Endaweni yokuba ubanike nje idola, ngoku uthi kubo mabaphathwe ngokungathi sele befile. Yindlela yokugqibela yokuxelela umntu ukuba bafile kuwe. Kuya nceda ukunqande ukufumana imbuyiselo kunye nokukhulula ibhondi ye- $ 1. Kwaye, kuthintela imigibe umntu awela kuyo.
Umalume womthengi wethu wazama ukuthatha njengombambeli. Waye waqalisa ukuthatha irente kwikhaya awayehlala kulo umama wakhe, akazange ahlawule irhafu, kwaye wazama ukuyithengisa esuka phantsi kweendlalifa ezifanelekileyo.
Sikwazile ukunceda umthengi wethu ukuba ambize ngegama lokuba nguMphathi welifa, athintele ukubonwa kwerhafu, kwaye athengise impahla ngaphezulu kwendlu yayifanele yonke loo nto ngelixa sinceda apha ekufumaneni indawo entsha yokuhamba. (Xa uneenkunzi ezimbini zeenkomo oku kunokuba nzima ngokwazo.) Kukwanyanzeleka ukuba sijongane nokubonisana nenkampani yokukhupha i-oyile ngeTanki ukuze siphinde siyenze itanki yeoyile kwaye silinde ukuba sihlawulwe de kuvalwe njengoko umxhasi wethu ebengenayo imali okanye ukwazi ukuxoxa nenkampani yokukhupha itanki yeoyile.
Ukuba negqwetha elitsha laseNew Jersey eliqonda ngaphezu kwe-probate kwimeko ye-probate kunokukhokelela kwiziphumo ezininzi ezonwabisayo. Ngokusisiseko, ukuba uneGqwetha eliLawulayo elisebenza kunye Igqwetha lezindlu, osebenza no Igqwetha elichasayo Ngubani owaziyo ukumisa ukuboniswa osebenza negqwetha lokuzibonela elifunekayo kule nto ukuqinisekisa ukuba umxhasi wethu wakwazi ukubuyisa impahla emva kokuba uMalume wakhe ebaleke nayo.
Ngaba ukuCwangciswa kweeMpahla eNew Jersey kunzima?
Ukucwangciswa kwezakhiwo eJersey kunokubonakala kunzima ukuba awuzange ukwenze ngaphambili, okanye awazi ukuba uqale ngaphi. Ukuba uzama ukudala iTrasti evela kwiScratch kwaye ufunde ukuba yintoni ekufuneka yenziwe ukuze usebenze ngokufanelekileyo ukwenza ukuthanda, kunokuba yinto engabizi kwaye kube lula ukunxibelelana nommeli we -ateate kunokuchitha iminyaka elandelayo ye-3 efunda ukuba ngummeli wecala.
Amaxwebhu enziwe kunye negqwetha laseNew Jersey mhlawumbi angakuhlala ixesha lobomi, okanye kufuneka ahlaziywe kwixesha elizayo xa kusenziwa umthetho omtsha werhafu. Ukuthetha nomcwangcisi wepropathi yobuchule obunokukunika izibonelelo zexesha lokuphila kwexesha lokuhlaziywa kwegqwetha ngolwazi lomntu siqu malunga nepropathi yakho, ishishini, imali, irhafu kunye nolwazi losapho. Kungcono ukuba ube nengcali yokubuza imibuzo, kunokuzama ukuba yingcali xa ixesha lakho linqongophele.
Ukwenza umyolelo kungenziwa mahala kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, isoftware esetyenziselwa ukwenza le misebenzi ayisoloko ichaza imeko ethile okanye ibhalwe kakuhle. Ayisiyiyo yonke isoftware yasimahla kwi-Intanethi, enokwenza ukuthembana kwezilwanyana zasekhaya, okanye avumele ukusasazwa kwezinto ezihlanganisiweyo zosapho. Kwaye, ngaba isoftware iyazi ukuba ukuba ne Umgwebi olilifa lakho ungqina ubungqina ayisiyonto ilungileyo?
Buza nayiphi na igqwetha labadala kwaye baya kukucebisa ukusebenzisa igqwetha labadala lokucwangciswa kwempahla. Kuba ungabahlawula kancinci ukuze ukwazi ukulungisa umyolelo wakho nelifa lakho, okanye ungabhatala imali eninzi emva kokuba udlulile ukumisa izalamane zakho ekulweni impahla yakho. Kwaye ndicinge ukuzama Sika iqabane lakho ngokomyolelo… Ucinga ukuba kuya kwenzeka ntoni?
Ndingayiphepha i-probate eNew Jersey xa ndisifa?
Ukuba uzama ukugcina indawo yakho yabucala kunye nokuthintela i-probate, singakunceda ukuseta ukuthembela kwakho. Intembelo ivumela ubuninzi bepropathi yakho ukuba budlule ngaphandle kokuya ngokuhamba.
Iyavakala into yokuba uthathe ulawulo lwelifa lakho kwaye uqiniseke ukuba amafa akho ubathandayo. Ummiselo wombuso we-New Jersey wombuso ngumthetho-ubungakanani obufanelekileyo-zonke Ayithathi qatha into yokuba umntwana omnye usenokuba sisityebi kakhulu aze anyamalale ngelixa omnye umntwana esenokuba ukhathalele isimilo esijikeleze iwotshi yeminyaka eyi-10 yokugqibela ehlala eJerisi ngelixa omnye umntwana ebehamba kwilizwe jikelele. Ungathatha ulawulo lwesicwangciso sendlu yakho. Umyolelo uya ngaphezulu kwemigaqo yemathematics kwaye ubonelela ngemiyalelo ethile kwinkqubo yokulungiselela.
Intembeko iyayiphepha inkqubo yokuphela kwayo konke. Ayisihambisi kuphela iimpahla nobani kwaye ufuna, inika ubumfihlo obungenakwenzeka kwinkqubo ye-NJ probate. Ukugcina iJersey Estate yakho ngaphandle kwamehlo oluntu kunokuba yenye yeenjongo zakho. Unakho ngokulula ukuba namaxwebhu owafunayo oyiliweyo ukusasaza ipropathi yakho ngendlela ofuna ngayo, ukukhusela ubumfihlo bakho, ukuphatha ishishini lakho elizayo kunye nemicimbi yezemali yakho emva kokuba udlule. Qinisekisa ukuba iindlalifa zakho zihlawula ubuncinci berhafu.
Ungaqala ucwangciso lwakho lweJer Estate Estate namhlanje ngomzamo omncinci. Ukucwangciswa kwesakhiwo esitsha saseJersey kunceda ukukhathalela usapho lwakho xa sele ungekho. Akufanelanga ukuba uyeke oku kumalungu osapho lwakho okanye iingcali emsebenzini wakho ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni xa usadlula. Ukubandakanya umthetho woKhathalelo lwaBantu abadala ojongana nokucwangciswa kwepropathi okunokukunceda kwimfundo yabantwana bakho abancinci okanye abazali bakho abasele bekhulile ngemfuno yexesha elide kubandakanya nolawulo kunye nezinye izinto ezingalindelekanga kunokukunceda ukuba wenze isicwangciso esikhethekileyo kubo. Akufanelanga ukuba ubanike imenyu yokhetho lokuqikelela ukuba loluphi uhlobo lomngcwabo olufunayo okanye zeziphi iinkonzo ozifunayo. Ngowuphi umbutho onqwenela ukunikela kuwo xa udlula? Ngaba unetyala? Ngaba yeyakho yeyakho impahla yidijithali xa uswelekile, njengamaqela akho e-facebook, kunye nolwazi lwekhonkco? Ngaba kukho umkhombandlela wabantu ofuna ukuba waziswe xa udlula? Ngubani ofumana ntoni njengelifa elikhethekileyo? Ziphi zonke iimpahla zakho? Imicimbi yokucwangciswa kwepropathi ingabonakala ngathi iphendula imibuzo emininzi, kodwa ukwazi ukuba yeyiphi imibuzo oza kuyibuza kunokuba sisiqingatha sedabi. Ungayichazanga eyokuba unegqwetha lokuncedisa umgwebi wakho ukuba afumane ukubuyisa kwakho kwirhafu yokugqibela, ahlawule amatyala akho, kwaye aqinisekise ukuba abo baxhamlayo bafumana iimfuno zabo ezizodwa. Unokuba usempilweni entle ukonwabela umsebenzi omninzi ngetoni zeinshurensi yobomi bosapho lwakho, ngoko awunokwazi ukuba lixesha elifanelekileyo lokulungiselela umyolelo kubandakanya zonke iinkcukacha ozifunayo?
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, okanye ufuna uncedo. Nceda uzive ukhululekile ukufikelela. Sitsalele kwi-973-200-1111 okanye usithumelele i-imeyile [Imeyile ikhuselwe], Siyabuxabisa ubumfihlo babathengi bethu.
hlobo: Sililungu le-NJ kunye ne-NY yasekhaya kunye nemibutho yaseburhulumenteni engenanto. Oku akunakuthathwa njengengcebiso yezomthetho. Iofisi yethu igcwele abameli abanokucacisa amaxabiso, irhafu yendawo yokuhlala, irhafu yesipho, ukukhangelwa kweeasethi zikarhulumente, ukuhambisa impahla, ukukhuselwa komntu ngamnye kutyalo-mali, njalo njalo. Nangona kunjalo ngenxa yokuba sinabameli abanikezela ngobunkokeli eluntwini, sivelana namabali eendaba abemele abantu kwinkundla zikarhulumente, asilogqwetha lakho de ube utyikitye umgcini. Ukusuka kuMantla eNew Jersey ukuya eSouth Jersey simele abathengi kunye neentsapho zabo. Silapha ukuzokhonza, kodwa asinakukunceda ukuphatha ii-asethi de sidibane nawe kwaye sagcina umgcini.
Ndingasisika isithandwa sam?
Intlawulo yeflethi yegqwetha eligwetyiweyo kwisixeko saseJersey, eNew Jersey
Amanyathelo e-6 ukuya kwiForum ngokukhawuleza kweNew Jersey
Khusela ii-asethi zakho ngethemba le-NJ kwaye ugcine ubucala bakho